Ibanga lokuhamba ukuya edolobheni/Ibhulakufesi - I-Airbnb
Ibanga lokuhamba ukuya edolobheni/Ibhulakufesi
Trondheim, Sør-Trøndelag, i-Norway
Ukudla kwasekuseni kufakiwe. (Uzenzele/uphakelwe, ngasiphi isikhathi osithandayo)
Ngokuhlala isikhathi esifushane, indawo yokupaka yamahhala ingase itholakalele imoto eyodwa. Ngibuze ngaphambi kokuthi ubhukhe. Azikho izimoto zokukhempa.
Ngithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Uma kunesidingo, kungenzeka ukulahla imithwalo yakho, esiteshini sebhasi, eduze kwesiteshi sesitimela. I-airplane express ibhasi i-Flybussen, nayo ima lapho.
Indawo ethule. 10-15 iminithi ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Trondheims Old Town Bakklandet. Indawo enezindlu ezincane zokhuni zomlando ezinamakhofi/izindawo zokudlela. Imizuzu engu-10 uhamba ngezinyawo ukuya enqabeni yaseKristiansten. Ukuhamba imizuzu eyi-10 ukuya enxanxatheleni yezitolo yaseSolsiden kanye nendawo yokudlela edumile/ibha kanye nokuhamba imizuzu emi-5 ukuya esitolo segrosa. Ukuhamba imizuzu engu-20 ukuya esigcawini sedolobha kanye nesonto le-Nidaros. Imizuzu engu-25-30 uhamba ngezinyawo ukuya e-NTNU nasethekwini. Imizuzu engu-15-20 uhamba ngezinyawo ukuya esiteshini sesitimela esimaphakathi, kanye nokuhamba ngezinyawo imizuzu eyi-10 ukuya esitobhini sebhasi esiseduze sezindiza.
Ifulethi liphezu kwegquma elingumqansa. Ikwisitezi sokuqala, futhi ngesikhathi sasehlobo ungahlala ngaphandle engadini, ubheke ulwandle, ukushona kwelanga, umnyuziyamu iRockheim, nesiqhingi esincane esinegama elithi Munkholmen (Monks' Island.)
Ngizohlala efulethini ngesikhathi sakho lapha, kodwa uzoba nekamelo lakho lokulala langasese, elingamamitha-skwele angu-6,5 ubukhulu, nombhede ophindwe kabili (150 cm). Ukhululekile ukusebenzisa igumbi lokuphumula, ikhishi kanye nendlu yokugezela njengoba kubhalwe emithethweni yendlu. Ikhishi linendawo yokudlela futhi uma ufuna ukubona okuthile ku-TV egumbini lokuphumula, ngiqinisekile ukuthi singafinyelela esivumelwaneni.
Kwesinye isikhathi ngingathola enye yamadodana ami asekhulile, ihlale nobunye ubusuku. Ikati elinobungane kakhulu nenja eyodwa encane, nayo ihlala lapha :-)
OKUHLANGANISIWE: Ibhulakufesi elizenzele wena/eliphekelwe, ngesikhathi osithandayo : Isinkwa, okusanhlamvu, ibhotela, isalami, ushizi, ujamu, amaqanda, isoso, ikhofi, itiye, ubisi nejusi yewolintshi. Futhi ushukela/izinongo namafutha omnqumo wokuthosa. Ukusetshenziswa kwekhishi nazo zonke izinto ezikuwo, (njengomshini wokuwasha izitsha, i-microwave, isiqandisi, umshini wekhofi, umshini wokuthosa, isitofu/uhhavini kanye ne-blender yama-smoothie njll). Umshini wokuwasha, okokuhlanza izingubo, nokomisa izinwele. Umbhede nelineni lokugeza. Ukuxhumeka kwe-inthanethi okungenantambo.
I-voltage kagesi lapha ingu-230 V.
4.82 · 214 okushiwo abanye